Ithoni yeRadio RT4 4G/LTE WiFi + Imakrofoni ephathwayo – iNethiwekhi yeerediyo
Ikhaya / IiRadio / IiRadiyo zenethiwekhi / Ithoni yeRadio RT4 4G/LTE WiFi + Imakrofoni ephathwa ngesandla
Ithoni yeRadio RT4 4G/LTE WiFi + Imakrofoni ephathwa ngesandla
I-Radio-Tone RT4 yimeko yobugcisa kwi-Android POC Radio. I-RT4 yiradiyo yesitayile esomeleleyo kakhulu, kunye nebhetri engapheliyo ye-4600mAh.
Le phakheji ibandakanya imakrofoni ephathwayo kunye nebhetri yokugcina.
Iikhowudi zekhuphoni aziyi kusebenza kule phakheji.
I-4600 mAh ibhetri yokugcina ($59)
Imakrofoni yeSithethi saNgaphandle ($59)
Ityala lesikhumba ($59)
Idesktop yeshaja kunye nentaba yokufunxa indebe ($59)
Ithoni yeRadio RT4 4G/LTE WiFi + Ubuninzi beMibhobho yeMibhobho ephathwa ngesandla
I-Radio-Tone RT4 yimeko yobugcisa kwi-Android POC Radio. I-RT4 yiradiyo yesitayile esomeleleyo kakhulu, kunye nebhetri engapheliyo ye-4600mAh
Imodeli yenombolo yerediyo ye-RT4
Iimpawu ze-eriyali ephezulu ye-GPS
Inkxaso yeGPS / BDS
Ubungakanani 130 * 56.5 * 34mm
Ubunzima bomzimba obungama-260g (kubandakanya ibhetri)
I-Sim Card Dual SIM khadi yokulinda kabini (enye yi-SIM encinci)
Inkonzo yokubonelela ivuliwe
Izinto zeShell zePlastiki
Inkqubo ye-Android OS 6.0
I-CPU MTK6737, i-Quad Core 1.3GHz
I-ROM 8GB iROM, inkxaso ye-TF khadi ukuya kuthi ga kwi-32GB
Iscreen se-2.4 intshi ye-QVGA ye-capacitive touch screen, 320 * 240px
I-Earphone Port Micro USB
Ukudluliswa kwedatha i-USB / iBluetooth
Ifowuni ye-Intanethi yeWAP / iWiFi
Ikhamera kabini iikhamera, ikhamera yangaphambili ye-2.0MP, ikhamera yangemva ye-5.0MP
Incwadi yefowuni 500
Imiyalezo yeSMS / MMS
Igalelo lesandla / ikhiphedi
I-GPS Ewe ikwaxhasa i-A-GPS / BDS
I-WiFi IEEE 802.11 b / g / n
IBluetooth Ewe, V4.0
Isenzisi se-G N / A.
Ixesha lokusebenza ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20
Ixesha elimisiweyo Ukuya kwiiyure ezingama-96
Ezinye izinto ezithunyelwa nge-imeyile, iiMifanekiso ezihonjisiweyo, iKhalenda, ikhaltyhuleyitha, iwotshi, iVenkile yokudlala, iTethering kunye nendawo ephathekayo, njl
Iilwimi IsiNgesi, isi-Bahasa Indonesia, isi-Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, Italiano,
ILatviesu, iLietuviu, iMagyar, iNederlands, iNorsk, isiPolish, isiPhuthukezi, iRomana, iSlovencina, iSuomi, iSvenska,
IsiVietnam, isiTurkey, isiGrike, isiBulgaria, isiRashiya, isiUkraine, isiHebhere, isiArabhu, isiThai, isiCambodia, isiKorea,
IsiTshayina esenziwe lula / esiqhelekileyo
Izixhobo 1 x 4600mAh ibhetri
1 x GPS i-Antenna
Ukutshaja idokhethi (ukhetho)
I-earphone yomoya (ngokuzithandela)
E-US, kuphela yi-AT & T kunye neT-Mobile exhasa esi sixhobo. Kwabanye abathwali e-US, kuya kufuneka usebenzise i-WiFi hotspot
Ipakethe yebhetri ye-4600 mAh
3 kwakhona ngenxa Ithoni yeRadio RT4 4G/LTE WiFi + Imakrofoni ephathwa ngesandla
kb4t (Umnikazi oqinisekisiweyo) - Aprili 10, 2019
I-RT4 ngumdlali oqinileyo. Isizathu sokuba ndingayiniki iinkwenkwezi ezi-5 kungenxa yokuba isikrini sicelomngeni ekusebenziseni.
Iimpawu kunye nezitshixo zebhodi yezitshixo zincinci kakhulu kangangokuba ukuzicofa ngeminwe eqhelekileyo kunika iziphumo ezingalindelekanga kunye nokudana. Uninzi luthethile ngale nto yokusebenza kwe-RT4. Iibhodi yezitshixo zeBluetooth ziyakusebenza kwaye mhlawumbi neempuku zebluetooth zinokusebenza kodwa xa umntu esentsimini, izinto ezinjalo zinzima kwaye zinzima ukusebenzisa.
Ubomi bebhetri buhle kakhulu. Ibhetri ye-4200 maH ihlala iintsuku ezi-2 ezigcweleyo ngokulula nangokudlulisa okuninzi. Uninzi luye lwancoma ubomi bebhetri ngesizathu esivakalayo. Kuba andizisebenzisi izinto zeselfowni kwaphela, oko kunokuba negalelo kubomi bebhetri obude kakhulu. I-RT4 ibonelela ngobuninzi bokufumana ivolumu yeaudio usebenzisa isithethi esakhelweyo okanye isithethi semic. Kwimoto ethuleyo kulula ukumamela nayiphi na incoko. Kwiveni yam yokusebenza enengxolo enkulu, ndisava ukuhanjiswa kakhulu ngaphandle kokubamba isithethi endlebeni yam. Ukuhambisa umsindo kuhlambulukile kwaye kukhwaza.
Khange ndiyisebenzise i-RT4 njengefowuni ngoko ke andinakukwazi ukuphawula kwelo cala lokusebenza kweyunithi. Ukusebenza kweWifi kugqwesile nkqu kwimiphetho yendawo yokungena ye-wifi. Ndonelisekile ngokupheleleyo kukusebenza kwe-RT4. Ndisebenzise i-RT4 ehleli kamnandi ekhayeni lam okanye evenkileni nakwiselfowuni. Kwimeko nganye, kusetyenziswa iZello ubukhulu becala, i-RT4 isebenze ngokuthembekileyo nangokuzinzileyo. Ndiyaseta useto kunye nolungelelwaniso xa ndihleli kwaye ndinokucinezela ngokuchanekileyo amanqaku afanelekileyo kwiscreen. Ukusebenza kwefowuni kufuna ukhathalelo kunye nokuchaneka kancinci xa kufuneka utshintsho lotshintsho okanye olunye uhlengahlengiso.
Iphakheji okanye inyanda ebonelelwa ziiNethiwekhi zeeRadiyo inika umsebenzisi yonke into efunekayo ukusebenzisa i-RT4 kwisethingi nganye. Ibhetri eyongezelelweyo, isithethi / mic, itshaja kunye nefestile yomoya zivumela umsebenzisi ukuba ahambe mobile okanye amile njengoko kufuneka, xa kufuneka njalo. Ndicebisa i-RT4. UFrank Haas KB4T, eFlorida eMelika
UBen Mathes (Umnikazi oqinisekisiweyo) - Aprili 4, 2020
Ndifumene i-RT4 yam ebalaseleyo! Uthathe imizuzu engama-30 ukuze iiapps zam zongezwe- unomathotholo usebenza kakuhle! UDuarte wehlise ixabiso emva kokuba ndiyalele kwaye uza kulungelelanisa nam! Umfo olungileyo uyaphambana ngale radio! K4BCM
Mb60304 - Novemba 1, 2020
Ndithenge i-1 malunga neminyaka emi-2 eyadlulayo, ngonomathotholo omkhulu.